दूतावासले गर्न खोज्या के? :: ज्योति देवकोटा :: Setopati
दूतावासले गर्न खोज्या के?
अन्ततः अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासले नेपाली पत्रकारहरुलाई गरेको अघोषित बहिष्कार सतहमा आएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ युएई शाखा र यहाँ क्रियाशिल नेपाली संचारकर्मीहरुलाई जानकारी नै नदिई सिमित व्यक्ति र संघसंस्थाहरु डाकेर
दूतावासले बिहिवार संविधान दिवस मनाएपछि पत्रकारलाई गरिएको अघोषित बहिष्कार सतहमा आएको हो।
युएईमा क्रियाशिल नेपाली पत्रकारहरुले दूतावासका कमजोरीहरु निरन्तर रूपमा सार्वजनिक गर्न थालेपछि दूतावास र पत्रकार बिच तिक्तता बढेको थियो।
सेटिङ मार्फत भिजिट भिजामा नेपाली कामदार युएई ल्याएर अलपत्र पार्ने, धम्की दिने , यातना दिने दलालहरुको दूतावाससंग भएको कनेक्सनका बारेमा निरन्तर फ्लो अप गरेपछि दूतावासले गत श्रावण ८ गते विज्ञप्ति निकालेर पत्रकारहरुको आलोचना गरेको थियो।
मानव तस्करहरुको विरुद्ध पीडित नेपाली मजदुरको पक्षमा समाचार लेख्दा दूतावासले विज्ञप्ति नै निकालेर पितपत्रकारिता गरेको आक्षेप लगाएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात श्रावण ९ गते नेपाल पत्रकार महासंघ युएईले विज्ञप्ति मार्फत दूतावासको विज्ञप्तिको खण्डन गरेको थियो। युएईका अन्य नेपाली संघसंस्थाहरुले समेत सार्वजनिक रुपमै दूतावासको आलोचना गर्दै पत्रकारको पक्षमा बोलेका थिए।
यस घटनाबाट अझ चिसिएको दूतावास र पत्रकार बिचको संबन्ध यसपटक भने दूतावास आफैले छताछुल्ल पारेको छ। संविधान दिवस अनिवार्य रुपमा मनाउने परराष्ट्रको निर्देशन बमोजिम बिहिवार अबुधाबीको एक ५ तारे होटेलमा दूतावासले भव्य कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो। जसमा कुनैपनी नेपाली पत्रकारलाई निम्तो गरिएन।
संविधानले चौथो अंगको महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको संचारकर्मीलाई त डाकिएन नै। दूतावासका गतिविधिहरुलाई नजिकबाट हेरेर कमिकमजोरी औंल्याईदिने अन्य धेरै संघसंस्थाहरुलाई समेत दूतावासले खबर गरेन। हाँस्यस्पद त के छ भने संविधान मान्दिन भन्दै संविधान दिवसलाई कालो दिवस भन्ने जनजाति महासंघका प्रतिनिधिहरु कार्यक्रम स्थलमा ठाँटिएर पुगेका थिए। केही नेपाली पत्रकारहरु पनि दर्शकको रूपमा सहभागी थिए। तर उनिहरु समाचार संकलनका निम्ति नभएर कार्यक्रम अवलोकनका निम्ति पुगेका थिए।
यता पत्रकार महासंघ युएईका अध्यक्ष भुपराज बस्यालले दूतावास जस्तो राज्यको जिम्मेवार निकायले आमसंचारलाई निषेध गर्नु दु:खद भएको प्रतिक्रिया दिए। संविधान दिवस जस्तो राज्यको महत्त्वपूर्ण पर्वमा पत्रकार महासंघ र पत्रकारहरुलाई सहभागी नगराउनु दु:खद भएको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै गैह्र आवसिय नेपाली संघ युएईका निवर्तमान अध्यक्ष सुदिप कार्कीले दूतावासले पत्रकारहरुलाई गरेको निषेधात्मक कदम प्रती असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। उनले "राज्यको चौथो अंगलाई बहिष्कार गरेर , संविधान मान्दिन भन्नेलाई चैं काखी च्यापेर कस्तो संविधान दिवस मनाउने हो महामहिम ज्यु ? " भनेर प्रश्न गरेका छन्।
त्यसैगरी नेपाली जनप्रगतिशिल मंच युएईका अध्यक्ष हेमन्त पौडेलले हरेक कार्यक्रममा पत्रकारहरुलाई आमन्त्रण गर्ने प्रचलन रहि आएकोमा यसपटक दूतावासले पुर्वाग्रहपुर्ण ढंगले आमन्त्रण नगरेको टिप्पणी गरे।
यसैगरी नेपाल प्रेस युनियन युएईले दूतावासको कार्यक्रममा पत्रकारहरुलाई खबर नगर्नु भनेको जनतालाई सुसुचित हुने अवसरबाट बन्चित गर्नु सरह भएको जनाएको छ। प्रेस युनियन युएईका अध्यक्ष नारायण भुर्तेलले दूतावास , पत्रकार महासंघ र युएईमा क्रियाशिल संपुर्ण पत्रकारहरु बिच समन्वय हुनुपर्ने बताए।
त्यसो त दूतावासले आफ्नो कमिकमजोरी औंल्याएको रिस नेपाली काङ्ग्रेसको प्रवाश संगठन नेपाली जनसंपर्क समिति माथी समेत पोखेको छ। दर्जनौं संघसंस्था र विशिष्ट व्यक्तिहरु डाक्न भ्याएको दूतावासले नेपाली जनसंपर्क समितिलाई आमन्त्रण गरेन।
जनसंपर्क समितीका सभापति खेमराज बस्नेतले पछिल्लो समय दूतावासलाई मजदुर मैत्री बन्न र नेपाली श्रमिकको हितमा ध्यान दिन खबरदारी गर्दै आएका छन्। यसैबाट विरक्तिएर उसले जनसंपर्क समितिलाई बेवास्था गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ।
नेपाल र संयुक्त अरब ईमिरेट्स (युएई) बिच २२ जनवरी १९७७ मा दौत्य संबन्ध स्थापित भएको हो। त्यसपछि ११ अप्रिल २००४ मा राजधानी अबुधाबीमा दूतावास खोलिएको हो। करिब ४ वर्ष कार्यवाहक स्तरमा कार्यसंपादन गरेपछि २१ डिसेम्बर २००८ देखि राजदुतस्तरमा स्तोरन्नती भई सेवा दिंदै आएको छ। निवर्तमान राजदुत धनन्जय झा पदावधि सकेर फर्किए यता लामो समय देखि दूतावास कार्यवाहक राजदुत नेत्र बहादुर टण्डनको भरमा चल्दै आएको छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ६, २०७४, ०९:१४:४५